Kuzvipira - Prairie State Legal Services
Prairie State inopa dzakasiyana siyana dzekuzvipira mikana kune vanhu vane ese akasiyana masosi eunyanzvi uye zvakaitika.
GWEDZI PRO BONO MIKANA
"Iri… ibasa revaya vane marezenisi sevakuru vematare kushandisa kudzidziswa kwavo, ruzivo rwavo, uye hunyanzvi hwavo kupa rubatsiro mukufarira veruzhinji uko muripo ungasavepo…. Kuedza kuri kuita gweta munzvimbo idzi humbowo hwehunhu hwakanaka hwegweta uye kugona kwavo kuita zvemutemo ... ”
Kutanga, Illinois Mitemo Yehunyanzvi Maitiro
Gore rega rega Prairie State Legal Services inomanikidzwa kuramba zvikumbiro zverubatsiro kubva kune vamwe vevanonyanya kutambura muraini medu nekuti vashandi vedu vanobhadharwa havana mukana wekuita zvinodiwa. Pasina rubatsiro rwemutemo, vanhu ava vanosara kuti vafambe nenzira iri pamutemo vega uye vazhinji vanongorega.
Pro bono vanozvipira vanga vachibatsira Prairie State kuvhara gango redzimhosva kubva kuma1980. Paunogamuchira imwechete pro bono kesi kubva kuPrairie State, iwe unoona seyakaenzana mukana kururamisiro yemunhu iyeye. Enzaniso dzemhando dzamatambudziko aunogona kubatsira nawo anosanganisira kubatsira anenge apona mumhirizhonga mudzimba kuwana dziviriro kubva kumushungurudzi wake; kugonesa mukuru kutora masimba ake emari uye ezvehutano sarudzo nekuita epamberi mirawo; kana kuchengetedza munhu akaremara kubva pakurambwa zvisiri pamutemo kwebatsiro zveruzhinji.
Dunhu rePrairie rinopa mikana yakawanda yemagweta, kubva kumakiriniki ekuyambira kumiririra mikana yekushambadzira yakadai sekunyora masimba egweta uye zvido, kana kutaurirana nemasangano ehurumende. Nzvimbo idzo vatengi vanoda rubatsiro rwako dzinogona kusanganisira: kurambana uye kuchengetwa; kuchengetedza kwevakuru uye kwevakuru; zvido zvakapusa; matsotsi zvinyorwa zvekudzingwa nekuiswa chisimbiso; uye kubhuroka uye zvimwe zvinhu zvevatengi.
Iyo nguva yekuzvipira inosiyana nenyaya, uye haazi ese makesi anoda kuoneka kwedare. Vazvipiri vanogona zvakare kuraira vamwe pro bono magweta uye nekutaurirana nePrairie State vashandi.
Iwe haudi pamberi pezvemutemo rubatsiro ruzivo kuti uzvipire. Pro bono basa inzira inogutsa yekuwana ruzivo munzvimbo nyowani yemutemo, kana kuraira rimwe gweta munharaunda yako yehunyanzvi. Tichashanda newe kugadzirisa mukana wepro bono kune zvaunofarira, hunyanzvi, uye kuwanikwa.
Nei uchizvipira kuPrairie State?
Kuita yako pro bono basa kuburikidza nePrairie State Legal Services kunouya nemamwe mabhenefiti:
Prairie State prescreens makesi ekukodzera uye kukodzera kwemari.
Pro bono kesi dzakafukidzwa pasi pePrairie State's malpractice inishuwarenzi.
Prairie State inopa maCLE emahara kune pro bono magweta.
Unogona kubatsirwa nekudzidziswa uye kurairwa kubva kune vane ruzivo magweta.
Pro bono maawa anogona kutaurwa pane yako yegore kunyoresa ARDC.
Wakarega basa, usingashandi, kunze-kwenyika, kana zano repamba?
Dare Repamusorosoro reIllinois Rinotonga 716 uye 756 inobvumidza pamudyandigere, kusaita basa, kunze kwenyika, uye zano reimba kuita pro bono services yePrairie State Legal Services.
Prairie State inogara ichitsvaga magweta ekumiririra vatengi mune dzakasiyana nyaya dzezvematongerwo enyika, kunyanya mumhuri, mutengi, nematare emutemo evakuru Kana iwe uine mibvunzo kana uchida rumwe ruzivo nezve edu azvino pro bono mikana, ndapota nyorera yako yemuno hofisi pro bono murongi kana [email inodzivirirwa] Kana iwe uchifarira kuve pro bono anozvipira nePrairie State, ndapota zadza fomu iri.
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve edu epro pro bono mapurojekiti, tarisa zvinyorwa zvedu pa Illinois Pro Bono mikana nesangano
Kana iwe uri mudzidzi anofarira kupindirana nePrairie State, ndapota ona iyo Internships chikamu pane Careers peji.
2015-2016 Pro Bono Kuziva Roster
Prairie State Legal Services inodada nemazana ayo evanozvipira, mazhinji acho akakudzwa nemasangano emunharaunda emabhawa nemamwe masangano nemipiro yavo.
2020 Pro Bono Mhemberero Mavhidhiyo
Tinogamuchira rubatsiro kubva kune vese vanozvipira. Unogona batsira kuvhara gango redzimhosva nekupindura mafoni, kuronga zviitiko zvekuunganidza mari, kugadzirira tsamba, kubatsira magweta edu, uye kubatsira vatengi vePrairie State munzira dzakasiyana siyana.
Dzimba Dzakanaka Tester
Uyu mukana ndewevanhu vanogara mune kana padyo nerimwe rematunhu anotevera: Lake, McHenry, Winnebago, Boone, Peoria, kana Tazewell.
Iyo Prairie State Legal Services Fair Housing Project iri kutsvaga vaedzo kuti vabatsire kuongorora rusarura pedzimba. Mushure mekudzidziswa, vaedzo vanosangana nevanopa dzimba uye vanonyora kudyidzana kwavo mushumo. Vashandi vedu vanozoongorora uye vofananidza nhepfenyuro kubva kune akasiyana testers kuti vaone kana rusarura rwekugara rwakaitika. Tinogamuchira vanhu vakaremara uye vanhu vemarudzi ese, mavara, mazera, madzinza, uye zvebonde.
Gamuchira stipend uye mileage reimbursement nguva imwe neimwe yaunotora chikamu bvunzo.
Gamuchira kudzidziswa kwakanaka kwedzimba (uye stipend mushure mekupedza bvunzo yekudzidzira).
Dzidza hunyanzvi hutsva, kusanganisira kunyora kunyora.
Batsira kuti nharaunda yako ibatanidze uye igamuchire.
testers VANOFANIRA kuva
chitupa chakapihwa nehurumende
mvumo yekushanda muUnited States
testers HAVAGONI kuva
pamberi pekubatwa nemhosva kana kusungwa kwemhosva dzinosanganisira kubiridzira kana kunyepa
rezinesi rinoshanda rezvivakwa
Ndokumbira kuti ubate murongi wedu wekuyedza, Jennifer Cuevas, pa [email inodzivirirwa] kana pa815-668-4412, kukumbira kunyorera, kana kana iwe uine chero mibvunzo nezve uyu mukana. Ndokumbira utaure dunhu rako rekugara mune yako e-mail. Tinovimba kunzwa kubva kwauri!
Bata Prairie State Director weVazvipiri Services kuti uwane rumwe ruzivo nezve asiri-gweta anozvipira mikana munharaunda yako. (e-mail: [email inodzivirirwa])
AMERICORPS VISTA ZVINHU ZVINOGONA
Maawa: Muvhuro kusvika Chishanu, 8:30 am kusvika 5:00 pm (kazhinji)
Chii chinonzi AmeriCorps VISTA?
Iyo AmeriCorps-VISTA chirongwa chirongwa chebasa renyika umo vanhu vanozvipira kune yakazara gore rebasa renguva yakazara kubatsira kurwisa hurombo. Mukudzorera basa ravo, nhengo dzinopihwa kutarisisa uye kudzidziswa, stipend yekurarama ingangoita $ 970 pamwedzi, mabhenefiti ekuchengeta vana, uye chirongwa chekutanga chekuchengetedza hutano. Pakupera kwegore ravo regore, nhengo dzeVISTA vane mukana wekutambira kadiki diki kana mubairo wedzidzo we $ 5,645.
Kune akasiyana akasiyana emamwe mabhenefiti mikana inosanganisira yakasarudzika kutarisisa kweyemubatanidzwa basa. Nepo mabhenefiti aya achibatsira, iko kubatsirwa kweiyo VISTA chirongwa ichi chaicho-chiitiko chenyika chinoita mutsauko munharaunda.
VISTAs muPrairie State Legal Services
Prairie State Legal Services isangano risingabatsiri rinopa rubatsiro rwevamiriri vepamutemo pasina muripo kune vanhu vane mari shoma kuchamhembe nepakati peIllinois. Prairie State ine mahofisi muBloomington, Joliet, Kankakee, McHenry, Ottawa, Peoria, Rock Island, Rockford, St. Charles, Waukegan, uye Wheaton, Illinois. Dzimwe nzvimbo dzeVISTA dzakananga kune mamwe mahofisi uye kune mamwe mapurojekiti isu tine kwakawanda kuchinjika kwekuisa VISTA.
VISTAs zvinobva kune akasiyana ezviitiko zvinosanganisira vachangopedza kudzidza kukoreji, magweta, nyanzvi pamudyandigere, uye vanhu vanodzoka kupinda muvashandi. Nepo zvinzvimbo zvine zvinangwa uye zvinangwa, maVISTA anounza matarenda avo akasarudzika uye nehunyanzvi pachigaro. Isimba, hunyanzvi, uye matarenda emaVISTA edu uye kubatana kukuru kwakagadzirira zvirongwa zvinobudirira.
Mutevedzeri weCommunications (s) achabatsira kuvaka mashandisiro esangano renhau dzezvematongerwo enyika uye nzira dzekutaurirana dzechinyakare kusimudzira kuwanikwa kweruzivo rwepamutemo uye kwemahara rubatsiro rwevamiriri vezvemitemo. Tinoda kuti chinzvimbo chiitwe muRockford, Illinois asi tinoramba tichichinjika. VISTA ichashanda pamwe nesangano revatungamiriri vevashandi kuti vasvike nharaunda munzvimbo yese yebasa. Tiri kutsvaga mumwe munhu anoziva nezve social media kusanganisira Twitter, Facebook, uye zvimwe zvishandiso. Unyanzvi hwakanaka hwekunyora, yakakwira nyaradzo netekinoroji, kuzvipira kubasa renharaunda, uye kufarira kushanda sechikamu chechikwata zvese zvinoshuviwa. Ruzivo rwemashure muutapi venhau kana kushambadzira ndeyekuwedzera.
Outreach uye Ongororo Coordinator
Iyi VISTA chinzvimbo chakanangana nekuita mukupararira kwakakura munharaunda medu kubatsira vanhu vane mari shoma kuwana mabasa epamutemo. VISTA inozobatanidza kuyedza kuunganidza munharaunda kuiswa pazvinhu zvakakosha zvemutemo uye kuunganidza data kuti vaongorore shanduko mune zvinodiwa munharaunda.
Yapfuura VISTAs yatanga maratidziro enharaunda, madhesiki ekubatsira pazvikafu zvekudyira uye makoreji emunharaunda, matsamba emagetsi kune vamiririri vezvemagariro, pamwe nekumwe kuedza kunogona kutsigirwa mushure menguva yekushandira yeVISTA yapera. Iyi nzvimbo inowanikwa kune vadzidzi vekoreji. Vadzidzi veChikoro chemutemo vanokurudzirwawo kunyorera. Unyanzvi hweSpanish hunodiwa, asi haudi. VISTAs inofanirwa kuve nehunyanzvi hwesangano uye hunyanzvi hwekutaurirana, inokwanisa nemakomputa uye zvishandiso zvepamhepo, vakasununguka kusangana nevanhu vatsva uye kutaura pamberi pemapoka, uye kuwanika kufamba mukati mePrairie State sevhisi yenzvimbo. Rezinesi rekutyaira rinodiwa. Isu tinonyanya kufarira kutsvaga nzvimbo idzi muRockford, Peoria, kana Bloomington.
Rubatsiro rweMutemo rweVaridzi vedzimba Kuparadzira uye Ruzivo / Dzidzo Project
VISTA ichavandudza kunosvika nekugadzira dhipatimendi rezvemutemo rinozvipira mumatare edzimhosva kubatsira vanhu vakatarisana nekufungidzirwa. Iyi nzvimbo inogona kunge iri muSt.Charles, Illinois. Akapedza chikoro cheMutemo, asi isu tichafunga nezvevanhu vane hunyanzvi hwesangano uye kujairana nematare ehurumende.
Advocacy Chirongwa cheVanhu Vakaremara
VISTA ichaenderera mberi nechirongwa chinonakidza umo vazvipiri vanodzidziswa kubatsira vanhu vakaremara muzvikumbiro zvavo zvekubatsirwa kwehurema. Vanozvipira vanobatsira kuunganidza humbowo hwekurapa kunyora kuremara kwevatengi uye kubudirira kwavo kwakabatsira vatengi vanoverengeka kuwana mabhenefiti makore nekukurumidza kupfuura zvavaizoita vega. IVISTA inobatsira kuongorora kesi, kutora vanozvipira, kuronga kuendesa zviitiko kune vanozvipira uye kupa rutsigiro kune vanozvipira. Isu takave nemagweta uye vasiri-magweta munzvimbo iyi mumakore mashoma apfuura. Iyi nzvimbo inogona kunge iri muSt.Charles, IL.
Yakawanda Yekuwedzera Coordinator
VISTA iyi inobatsira kuwedzera vanhu vane mari shoma kuwana mukana wepamutemo wevashandi vehurumende kuburikidza nePSLS Telefoni Counselling Service, nekutora, kudzidzisa nekubatanidza magweta evanozvipira. Iyi VISTA chinzvimbo chinowanikwa kune vepamutemo chikoro vanopedza kudzidza kana vezvematongerwo enyika. VISTA ichaenderera mberi nebasa rakanakisa rekare magweta eVISTA aitwa mukuvaka sevhisi iyi. Iyi nzvimbo inogona kunge iri muW Wheaton, IL.
Veterans Outreach neMubatsiri Wemabasa
VISTA iyi ichavakira pabasa rakatangwa nemaVISTA apfuura mukugadzira kiriniki yepamutemo yevanowana mari shoma kuLovell Federal Health Care Center kuNorth Chicago pamwe nedzimwe nzvimbo. VISTA ichaenderera mberi nekuita kiriniki iyi, kuunganidza, kudzidzisa uye kutsigira magweta evanozvipira ayo achabatsira mukupa masevhisi aya nekuburitsa ruzivo kuna Lovell Staff.
KUSHANDIRA MIKANA IYI
Nyoresa VISTA pa:
Nyorera nzvimbo idzi pa:
(Nzvimbo dzakanyorwa pasi pePrairie State Legal Services Nharaunda Impact Project. Tsvaga zvinzvimbo pasi peHurumende yeIllinois uye dzimba dzenzvimbo yenyaya.)
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve Prairie State Legal Services, enda ku pslegal.org
Kana iwe uine mibvunzo, bata Gail Walsh pa [email inodzivirirwa].
“Pro Bono basa zvinoreva kuti uri kubatsira mumwe munhu anoda rubatsiro uye asina nzira yekuhaya gweta rakazvimirira. "Uyuwo mukana wekuita zvakanaka munharaunda yatinogara."
Bozeman Muvakidzani Patton & Noe, LLP (Moline, IL)
“Zvinogutsa kwandiri. Zvinondibatsira kubatsira vanhu nekuti ndinonakidzwa nekubatsira vanhu. Uye pandinobatsira munhu uye panopera nyaya vanondimbundira kana kuti vanonyemwerera voti ndinokutendai zvikuru nekundibatsira, ndinovimba ndinokwanisa kuvabatsira muhupenyu hwavo uye kuvabvisa pamamiriro ezvinhu. ”
Van Der Snick Mutemo Firm, Ltd. (St. Charles, IL)
"Chero zvauri kuda kuita kana kugona kuita, kunyangwe iri yekufona kana kupindura mibvunzo. Iri ibasa rinopa mubayiro kana uchizviita uye unobatsira vanhu ava vanoda rubatsiro. ”
“Ndinoona basa richifadza zvinoshamisa, zvikuru basa randiri kuita. Kune vanhu vari kuedza kuwana mukana wechipiri muhupenyu uye vanokoshesa chero munhu anovafarira uye mhedzisiro yacho yave inogutsa. ”